Indlela Yokunyamekela Ngamazwi Ahamba Ngama-Biose
Ukunyamekela Iintetho Zakho Zeebhayisikili
Izwi le-Bike ngokuqhelekileyo alidingi ukugcinwa okuninzi. Awuhambi okanye aphephe kwaye ke akukho nto eningayenzayo kunye neefowuni ngaphandle kokubheka rhoqo ngezinye iinkcukacha ukuqinisekisa ukuba akukho nto ikhululekile kwaye mhlawumbi uyisula phantsi ngexesha elifanayo ukususa ubuninzi obukhulu .
Ukuze ufumane ingqiqo ukuba uthetha ukhululekile, thatha isikhashana ukugxotha izithethi kwisondo lakho, ukuxuba ngamnye umntu kunye nesicatshulwa sakho somnwe njengoko udlala ihabhu.
Iifowuni kwisondo ngokunyanisekileyo ziya kuvakala ngezwi okanye inqaku elifanayo xa uwatyha. Kunzima ukuchaza kodwa kuya kuba lula ukuyiqonda xa uzama. Ukukhululeka okuthethileyo kuya kuvelisa inqaku eliphantsi okanye liza kukhwela, njengokuthi uyayicutha itambo yegitala engenawo uxinzelelo kuyo.
Kwakhona, xa wenza oku, vula i-bike yakho phantsi okanye uyibeke ngendlela ongayifaka ngayo isondo kwaye uyibukele ngokukhululekile ukusuka phezulu. Ukuba ivili libonakala liphuma ukusuka ecaleni ukuya kwelinye icala njengoko lijika okanye lixubha malunga neepakisha zakho zokuqhawula apha nakhona, mhlawumbi unesiprofetho sokulungiswa kwaye ivili lifuna ukutyunjwa.
Ngomkhonto othethiweyo, unako ukuwukhupha okanye uqinqobe ingxobo kwiindawo ezibonakala zingekho kumgca ukuze uzame ukubuyisela i-tire kwi-adjustment, kodwa le yinkqubo ekhohlisayo kwaye ngamanye amaxesha ihamba kakuhle kwiingenelo ivenkile yebhayisiki yasekuhlaleni. Akubizi imali eninzi ukuba kwenziwe oku.
Injongo kukuba nomkhonto ongekho nje ngqo, ngaphandle kwembombo ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla njengoko ijika, kodwa kwakhona ijikeleze ngokugqibeleleyo kwaye ayikho indawo ephathekayo njenge-oval. Xa umlenze ulungelelaniswe ngokufanelekileyo neenzwi eziqiniswe ukuxhatshazwa okuchanekileyo, abantu bathi isondo sinjalo.
Indlela yokutshintsha ibhayiseki yeBhasiki
Umculi kunye neDyslexia
Ukuhlaziywa kwe-Ice Cube 'Raw Footage'
Iimbopheleleko zeCashier Cashier
Indlela yokufunda Isatifiketi seNautical
I-Pargo: Catch Baja's Brute Snapper
Ubukhosi bamaSilamsi: iMfazwe yaseSiffin
7 Iingqongquthela Abafundi beKholeji loNyaka wokuqala
Indlela yokuBhuqa i-Skateboard okanye i-Longboard
I-Hybrid Bizing Sizing kunye neFit Guide
Top Motley Crue Iingoma zee-80s
Amazwi aseSpeyin Axelisa Ubomi kwiNdlela ye-Onomatopoeic